Uyilo lweBlackmagic ibhengeza i-ATEM Mini yokuGqibela | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » iindaba » Uyilo lweBlackmagic ibhengeza i-ATEM Mini yokuGqibela
Uyilo lweBlackmagic ibhengeza i-ATEM Mini yokuGqibela
Iimodeli ezintsha ezinamandla ngakumbi ze-ATEM Mini zibandakanya ukufakwa kwe-8, ii-6 DVEs,
Izitshixo ze-chroma ezi-4, indlela eyi-16 ye-multiview, amaqhosha ama-2 asezantsi, abadlali beendaba aba-2 nangaphezulu!
I-Fremont, CA, e-USA-ngolwesiThathu, ngoFebruwari 17, 2021 - Blackmagic Design namhlanje ibhengeze i-ATEM Mini Extreme, imodeli enkulu enkulu yokutshintsha kwemveliso ye-ATEM Mini. Le modeli intsha sisona sitshintshi siphambili se-1 M / E esinegalelo ezi-8, ii-4 ATEM eziPhambili zeChroma Keyers, zizonke ii-6 ze-DVEs ezizimeleyo, abadlali beendaba be-2, amaqhosha ama-2 asezantsi, i-16 indlela ye-multiview, ii-2 USB zonxibelelwano kunye neendawo ezininzi. HDMI iziphumo. Kukho imodeli entsha ye-ATEM Mini Extreme ISO ebandakanya zonke ezi zinto zinamandla kunye ne-injini enamandla yokurekhoda enokurekhoda zonke izinto ezi-8 kunye nenkqubo yemijelo eli-9 yokurekhoda. Zombini iimodeli ezintsha zibandakanya injini yokusasaza esemgangathweni yokusasaza ngqo kwiYouTube, Facebook, Twitter nangaphezulu.
I-ATEM Mini yokuGqithisela kunye ne-ATEM Mini e-Extreme ISO ziyafumaneka kwangoko ukusuka Blackmagic Design abathengisi kwihlabathi liphela ukusuka eUS $ 995.
Iitshintshi ze-ATEM Mini zenza kube lula ukwenza imveliso yeekhamera ezininzi zobungangamsha ngokusasaza kwiYouTube kunye nemiboniso emitsha yeshishini usebenzisa iSkype okanye iZoom. Dibanisa ngokulula i-ATEM Mini kwaye abathengi banokutshintsha baphile ukuya kuthi ga kwi-8 yokufaka ikhamera ekumgangatho ophezulu kwimifanekiso esemgangathweni ebalaseleyo. Okanye qhagamshela ikhompyuter kwizilayidi zePowerPoint okanye kwimidlalo yokudlala. Eyakhelwe kwi-DVE ivumela umfanekiso onomdla kwiziphumo zemifanekiso, ilungele ukuphawula.
Zininzi iziphumo zevidiyo. Zonke iimodeli ze-ATEM Mini zine-USB esebenza njengekhamera yewebhu ukuze abathengi basebenzise nayiphi na isoftware yokusasaza ngelixa i-ATEM Mini Pro kunye ne-ATEM Mini eziGqithisileyo zongeza ukusasaza ngqo kunye nokurekhoda kwiidiski ze-USB. Kukho kwakhona HDMI iprojekti. Ukufakwa kwemakrofoni kuvumela ukuba umgangatho ophezulu wedesktop kunye ne-lapel mics yodliwanondlebe kunye neenkcazo.
Ukuhambelana kwe-ATEM Mini konke kuyilo olunye kubandakanya zombini iphaneli yokulawula kunye nokunxibelelana. Iphaneli engaphambili ibandakanya ukusetyenziswa ngokulula kwamaqhosha ekukhetheni imithombo, iziphumo zevidiyo kunye notshintsho. Amaqhosha emithombo makhulu kangangokuba kunokwenzeka ukuba uwasebenzise ngokuziva, uvumela umbonisi ukuba enze utshintsho. Abathengi bafumana amaqhosha okuxuba umsindo. Kwi-ATEM Mini Pro kunye neemodeli eziGqithisileyo abathengi bafumana amaqhosha erekhodi kunye nolawulo lokusasaza, kunye namaqhosha okukhetha imveliso avumela abathengi batshintshe imveliso yevidiyo phakathi kweekhamera, inkqubo kunye ne-multiview. Kwiphaneli esemva kukho HDMI Unxibelelwano lweekhamera okanye iikhompyuter, igalelo lemayikrofoni eyongezelelweyo, i-USB kwikhamera yewebhu ngaphandle kunye HDMI Iziphumo ze "aux" zevidiyo yenkqubo.
I-ATEM Mini Pro kunye neemodeli ze-ATEM Mini eziGqithisileyo zakhiwe kwiinjini zokusasaza izixhobo zokusasaza ngqo ngokudibana kwe-ethernet. Oko kuthetha ukuba abathengi banokusasaza ngqo kwiYouTube, Facebook nakwiTwitch kumgangatho ongcono, ngaphandle kwezakhelo ezilahliweyo kunye noseto olulula. Khetha nje inkonzo yokuhambisa kwaye ufake iqhosha lokusasaza. Kukho iiphalethi kuLawulo lweSoftware ye-ATEM yokuseta ukusasaza, kunye nenqanaba lokusasaza likwaboniswa kwi-multiview. Isimo sokusasaza kulula ukusiqonda njengoko isalathiso senqanaba ledatha sibonisa isantya se-intanethi esifunekayo kwifomathi yevidiyo esetyenziswayo. Ukuba abasebenzisi banengqondo yezobuchwephesha, abathengi banokuhlaziya iiprofayili zokusasaza kwifayile yokuseta yeXML ukulayisha iinkonzo ezintsha.
Ukuba abasebenzisi benza imveliso ebonakalayo kwindawo leyo i-ATEM Mini Pro kunye neemodeli eziGqithisileyo zixhasa ukudibanisa iApple okanye ifowuni ye-Android kwizibuko le-USB ukusebenzisa idatha yeselfowuni. Kukwalondolozo olukhulu kunxibelelwano oluphambili lwe-Ethernet. Ukufowunelwa kwefowuni kusebenza ngesantya esiphezulu seefowuni ze5G kunye neefowuni ze4G eziqhelekileyo. Isitshintshi se-ATEM siya kubona ngokuzenzekelayo xa ifowuni iqhagamshele kwaye itshintshe uqhagamshelo lwayo lwe-intanethi ukuyisebenzisa, ishenxisa isidingo sokutshintsha useto. Xa iqhagamshelwe, ifowuni iya kuba namandla kwizibuko le-USB kwaye ihlala ihlawulisiwe kwisitshintshi. Ngokusebenzisa i-tethering yefowuni kunye nedatha ephathekayo, i-ATEM Mini Pro kunye ne-ATEM Mini eziGqithisileyo baba zizisombululo ezifanelekileyo zemveliso yeselfowuni.
Iimodeli ze-ATEM Mini kunye neemodeli eziGqithisileyo zikwaxhasa ukurekhodwa ngokuthe ngqo kwedatha yabo yokusasaza kwiidiski ze-USB. Oko kuthetha ukuba abathengi bafumana ukurekhodwa okude kakhulu kwiifayile ezifanayo ze-H.264 kunye nevidiyo ye-AAC esasazwa ngabathengi, ke abathengi banakho ukuhambisa ukulayishwa kuyo nayiphi na indawo yevidiyo ekwi-intanethi, enje ngeYouTube okanye iVimeo. Ukurekhoda kwiidiski ezininzi kukwaxhaswa ngehabhu ye-USB okanye iBlackmagic MultiDock, ke xa idiski igcwalisa ukurekhoda inokuqhubeka kwidiski yesibini yokurekhoda okungayeki. Useto lweRekhodi kunye nokukhethwa kwediski kusetiwe kuLawulo lweSoftware ye-ATEM kwaye kukho imeko yokujonga irekhodi kwindawo eyakhelweyo ngaphakathi.
Iimodeli ze-ATEM Mini Pro kunye neemodeli ezigqithileyo ze-ISO zivumela abathengi ukuba bahlele umcimbi wabo ophilayo njengoko benokurekhoda imijelo emininzi yevidiyo, kubandakanya ukutya okucocekileyo kwawo onke amagalelo kunye nenkqubo, zonke ngaxeshanye. Imifanekiso yeephuli zemidiya esetyenzisiweyo nayo igcinwa kunye neefayile zevidiyo. Iifayile zevidiyo zibandakanya iithegi zemethadatha ezinje ngekhodi yexesha kunye neenombolo zekhamera. Khawufane ucinge ngokuhlela kwakhona umboniso wabo ngamabakala emibala emitsha, iziphumo kunye nemizobo. Nokuba imithombo yeaudiyo yonke irekhodwe ukuze abathengi bakwazi ukudibanisa kwakhona umsindo wabo.
Iimodeli ze-ISO zigcina ifayile yeprojekthi yeDaVinci Resolve, ke ngonqakrazo olunye kubathengi banokuvula imveliso yabo ngokuhlela ividiyo. Konke ukusika, ukunyibilika kunye nemizobo yemithombo yeendaba iya kulayishwa. Oku kuthetha ukuba abathengi banako ukuhlengahlengisa amanqaku okuhlela okanye nokutshintsha ngokupheleleyo ukubetha. I-DaVinci Resolve Sync Bin ivumela abathengi ukuba bakhethe iifoto ezintsha nge-multiview ke kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Abathengi banokuphinda baxhume kwiifayile zekhamera ye-Blackmagic RAW yokongeza ukulungiswa kombala wobungcali kunye nokugqibezela Ultra HD.
Ngamagalelo amabini azimeleyo e-3.5mm stereo yeaudiyo, abathengi banakho ukuqhagamshela ii-microphone zedesktop kunye neelaptop. Ngamagalelo ama-2 ongezelelweyo odiyo, abathengi banokuqinisekisa ukubamba iindwendwe kunye neendwendwe zombini zinemakrofoni e-lapel xa zisenza udliwanondlebe. Zonke iimodeli zibonisa umxube womsindo weFairlight nazo zonke HDMI igalelo kwaye zombini igalelo lemakrofoni zonke ziqhagamshelwe kumxube wesandi ukuze abathengi baphile ngokudibanisa kuyo yonke imithombo yesandi. I-ATEM Mini Extreme nayo yongeza imveliso yentloko.
Nganye HDMI igalelo linenqanaba labo lokuguqula imigangatho. Oko kuthetha ukuba i-ATEM Mini iya kuguqula ngokuzenzekelayo imithombo ye-1080p, 1080i kunye ne-720p kwimigangatho yokutshintsha ividiyo. Inkqubo ye- HDMI Iziphumo ziyimveliso eyiyo "aux" ukuze abathengi bakwazi ukucoca utshintsho ngalunye HDMI igalelo kwimveliso. Kunye neemodeli ze-ATEM Mini eziGqithisileyo zixhasa ii-2 ezisezantsi ze-latency ngqo. Kwimodeli ezinamandla ngakumbi ze-ATEM Mini Pro kunye ne-ATEM Mini eziGqithisileyo, i HDMI Iziphumo zinokukhethwa ukubonisa umboniso opheleleyo.
Inkqubo yoLawulo lweSoftware ye-ATEM ivula amandla afihliweyo e-ATEM Mini kwaye ivumela ukufikelela kuwo onke amanqaku kwisitshintshi. Ulawulo lweSoftware ye-ATEM inenqaku lomsebenzisi ojongiweyo weswitscher kunye neparts yeparamitha yokwenza uhlengahlengiso olukhawulezayo. Nangona abathengi banokuqhagamshela ngesiqhelo nge-USB, ukuba abathengi banxibelelana besebenzisa i-Ethernet kunokwenzeka ukuba abasebenzisi abaninzi banxibelelane ne-ATEM Mini besebenzisa iikopi ezahlukeneyo zoLawulo lweSoftware ye-ATEM kwiikhompyuter ezahlukeneyo. Abathengi banokugcina imeko yokutshintsha njengefayile yeXML. Ukuba abathengi bafuna ukudlala ikliphu, abathengi banokulawula iirekhodi zehyperDeck nge-Ethernet.
Eyakhelwe "kwimithombo yeendaba" ivumela ukulayishwa ukuya kuthi ga kwi-20 yemizobo yokusasaza ye-RGBA yemizobo yezihloko, iipleyiti zokuvula kunye neelogo. Abathengi banokusebenzisa nangoku izakhelo zeziphumo ezintsonkothileyo ezinjengokusula imifanekiso. Imizobo inokulayishwa ngoLawulo lweSoftware ye-ATEM okanye ikhutshelwe ngokuthe ngqo kwiFotohop isebenzisa i-plug-in ye-ATEM Photoshop.
Iimodeli ze-ATEM Mini eziGqithisileyo zibandakanya amaqhosha ama-4 anyukayo e-chroma kwaye oku kuvumela abathengi ukuba bakhe iiseti ezinomdla. Ngamaqhosha ama-4 ezimeleyo e-chroma, abathengi bafumana isitshixo kwikhamera nganye ukuze abathengi bakwazi ukwakha iseti ebonakalayo ukuya kuthi ga kwiikhamera ezi-4. Ngabathengi be-ATEM Mini abagqithisileyo banegalelo ezi-8, ezi-4 zokuzisebenzisa kwiikhamera kwaye enye i-4 inokudityaniswa kwikhompyuter esetiweyo yentsusa yemvelaphi enikezelweyo. Okanye abathengi akufuneki bahambise iikhamera zabo, abathengi banokwenza iiseti ezibonakalayo zekhamera ngokulayisha kwangaphambili ezinikezelweyo kwimvelaphi yemifanekiso evela kubadlali beendaba nakwiphuli yemithombo yeendaba. Abathengi banokuseta ii-macros zokutshintsha iikhamera kunye nokulayisha imvelaphi echanekileyo kubadlali beendaba. Okanye usebenzise i-DeckLink Quad HDMI kwaye uphile isoftware esetiweyo.
Ukongeza kwii-DVEs ezizimeleyo ezi-2 kwiimodeli ze-ATEM Mini eziGqithisileyo, kukwakhona iprosesa enamandla eSuperSource enamaqondo ama-4 ongezelelweyo we-DVE kunye nongqimba lwangemva, zonke zibonakala kwi-ATEM Mini Extreme njengomthombo wokufaka owongezelelweyo. Nayiphi na igalelo levidiyo ye-ATEM Mini eXineneyo inokusetyenziselwa iSuperSource DVE nganye, emva koko zonke zahlulwe zangaphezulu kwimvelaphi yesitayile semithombo yeendaba. I-SuperSource ilungele ukwenza imifanekiso emininzi kwimiboniso nabantu abenziwe udliwanondlebe kuba abathengi banokuseta isiphumo ngaphambi kokuyibeka emoyeni, bagcina zombini ii-DVE eziphambili zisimahla kweminye imisebenzi. I-SuperSource ifana nokuba neswitshi eyongezelelweyo ye-VFX eyakhelwe ngaphakathi.
Xa usenza iimveliso ezikhulu ngoku kunye neekhamera ezininzi, kuluncedo kakhulu ukubona yonke imithombo yabo yevidiyo ngaxeshanye kwisilumkiso esinye. Iimodeli ze-ATEM Mini kunye neemodeli ze-ATEM Mini eziGqithisileyo zibandakanya ubuchwephesha bobuchwephesha obuvumela abathengi ukuba babone onke amagalelo evidiyo, ukujonga kwangaphambili kunye nenkqubo enye HDMI umabonwakude okanye ukubeka esweni. Umbono ngamnye wekhamera ubandakanya izikhombisi zetali ukuze abathengi bazi xa umthombo ngamnye usemoyeni, kwaye umbono ngamnye uneelebheli zesiko kunye neemitha zokumamela. Kwaye iimodeli ze-ATEM Mini eziGqithisileyo zivumela abathengi ukuba bakhethe ukuya kuthi ga kwi-16 yokujonga ngokwesiko. Imultiview ikwabandakanya inqanaba lokurekhoda, ukusasaza kunye nomxube wezandi.
I-Bridge ye-ATEM yokusasaza isiguquli sevidiyo esivumela abathengi ukuba bafumane umjelo we-H.264 kuyo nayiphi na i-ATEM Mini Pro okanye kwi-ATEM Mini Extreme kwaye bayiguqulele kwi-SDI kwaye HDMI ividiyo. Oku kuthetha ukuba abathengi bangathumela ividiyo kwiindawo ezikude ngeenxa zonke kwinethiwekhi ye-Ethernet, okanye nge-intanethi kwihlabathi jikelele. Kuyenzeka ukuba isebenzise iikhowudi ze-H.264 eziphambili kumgangatho ophezulu kumaqondo aphantsi edatha. Ukuseta kulula njengoko isixhobo se-software ye-ATEM singenza iifayile zokusetha abathengi abanokuthumela i-imeyile kwizitudiyo ezikude.
"Ezi modeli zimbini zintsha ze-ATEM Mini lonyuko olukhulu lweempawu zokuyila kwaye ngoku zezona zinamandla zethu kwi-2 M / E switch!" utshilo uGrant Petty, Blackmagic Design CEO. "Abathengi bethu be-ATEM Mini batyhala umphetho kwimveliso ebukhoma, siziva ngathi bayayila ngeendlela ezintsha nezinomdla kwaye bayila ukuhamba komsebenzi esingazange sikubone ngaphambili. Ke sive ngathi kubalulekile ukuba sakhe imodeli entsha ye-ATEM Mini eya kuthi ithathe amanqaku ngaphezulu koko bekukho ngoku, ukuze abathengi bethu baqhubeke nokwenza izinto ezintsha ngokuhamba komsebenzi. Ezi modeli zintsha zikhulu, zinamandla kwaye zisabiza kakhulu.
I-ATEM Mini yokuGqithisela kunye neempawu ze-ATEM Mini eziGqithisileyo ze-ISO
Iimpawu zoyilo olusekwe kwipaneli yolwakhiwo oluncinci.
Ixhasa ukudibanisa ukuya kwiikhamera ze-8 okanye iikhompyuter.
Ukurekhoda kwiidiski ze-USB kwi-H.264.
Amagalelo amabini omsindo we-stereo yokudibanisa ideskithophu okanye imibhobho ye-lapel.
Imigangatho ngokuzenzekelayo iguqula kwaye iphinde ivumelanise zonke HDMI igalelo.
Kubandakanya uLawulo lweSoftware ye-ATEM yasimahla yeMac kunye neeWindows.
Imithombo yeendaba yangaphakathi yemifanekiso ye-20 RGBA yezihloko, iiplati zokuvula kunye neelogo.
4 isitshixo se-ATEM esiPhambili seChroma yezitshixo zomsebenzi oluhlaza / oluhlaza okwesibhakabhaka.
Ii-DVEs ezizimeleyo ezi-2 kunye neSuperSource ene-4 eyongezelelweyo ye-DVEs.
Indlela ye-16 ye-multiview yokujonga zonke iikhamera, ukurekhoda kunye nenqanaba lokusasaza.
I-ATEM Mini Extreme kunye ne-ATEM Mini Extreme ISO ziyafumaneka ngoku zisuka kwi-US $ 995, ngaphandle kwemisebenzi yasekuhlaleni kunye neerhafu, ezivela Blackmagic Design abathengisi emhlabeni jikelele.
Imifanekiso yemveliso ye-ATEM Mini Extreme kunye ne-ATEM Mini Extreme ISO, kunye nazo zonke ezinye Blackmagic Design iimveliso, ziyafumaneka www.blackmagicdesign.com/media/images.
I-ATEM Encinci kakhulu Blackmagic Design 2021-02-17
Previous: Uyilo lweBlackmagic lubhengeza iNew Blackmagic Web Presenter HD
next: diguise ixhasa i-StarTracker yeXR